डोनाल्ड ट्रम्पलाई पर्यो पारिवारिक शोक, ट्रम्पले भने ‘मेरो हृदय दुखेको छ’ « गोर्खाली खबर डटकम
डोनाल्ड ट्रम्पलाई पर्यो पारिवारिक शोक, ट्रम्पले भने ‘मेरो हृदय दुखेको छ’
काठमाडौ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पारिवारीक शोक परेको छ । उनका भाईको ७२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । केही दिन अघि अस्पताल भर्ना भएका ट्रम्पका भाई रबर्ट ट्रम्पको निधन भएको छ । ह्वाइट हाउसले विज्ञप्ती जारी गरेर सो कुराको बारेमा जानकारी गराएको छ । शनिबार अबेर राती ह्वाइट आउसले एक विज्ञप्तिमा जारी गरेर यो कुरा पुष्टि गरेको छ।
राष्ट्रपतिले विज्ञप्तिमा भनेका छन, मेरो भाइ रबर्टको आज रात शान्तिपूर्वक निधन भएको खबरले मेरो हृदय दुखेको छ । “उ मेरो भाई मात्र थिएन, मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी पनि थियो । ऊ यसै हरायो, तर हामी फेरि भेट्नेछौं। ”
एनबीसी न्यूजका अनुसार उनी ७२ या ७१ वर्षका थिए भन्ने बारे विवादपूर्ण रिपोर्टहरू थिए। राष्ट्रपति शुक्रबार बिरामी भाइलाई न्यूयोर्क शहर गएका थिए ।
उनको मृ’त्युको कारण के हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। कोरोनाको पनि शंका गरिएको छ । ह्वाइट हाउसले रोबर्ट ट्रम्पको बिराम र उनको अस्पताल भर्तीको मिति जानकारी दिएको छैन । उनी ट्रम्पका चार भाई-बहिनीहरू मध्ये एक थिए र भर्खरै उनीहरूको भान्जी मेरी ट्रम्पले किताब प्रकाशन खोज्दा रोक्न मु’द्दा दायर भएको थियो ।
सुनको मूल्यमा गिरावट घ’ट्यो सुन’को मुल्य , बजार’मा सुन किन्ने’को घुइँचो !
राती खुट्टा फर्किन्छ ? यी काम गर्नुहोस ७ दिनमै समस्याबाट छुटकरा पाउनुहुनेछ